Sharciga Baananka SAFE ee Bixinta Helitaanka Adeegyada Baananka ee Ganacsatada Xannaanada Sharci Ahaan Leh
Ganacsiga xashiishadda sharciyeed ayaa xilligan ah mid ka mid ah warshadaha ugu saaxiibka badan waddanka Mareykanka oo leh qol weyn oo koritaan leh. Sanadkii 2017 oo kali ah, warshadaha marijuanaadku waxay diiwaan geliyeen wadar ahaan $ 9 bilyan oo iib ah, iyo kobaca suuqa ayaa la filayaa inay ku dhufato $ 21 bilyan marka la gaaro 2021. Sida hadda, in ka badan 33 gobol ayaa sharciyeysan isticmaalka daroogada ujeeddooyinka caafimaadka iyo madaddaalada, oo ay kujirto California , Maine, Massachusetts, Nevada, iyo Degmada Columbia.
In kasta oo cannabis ay u sii kordhayso sharci ahaan, gobollo badan ayaa wali u tixgeliya daroogada inay yihiin sharci darro sida sharciga federaaliga ah. Sidaa daraadeed, raacitaanka shuruucda gobolka waa lama huraan haddii aad rabto inaad gasho warshadaha. Ganacsadayaasha doonaya inay aasaasaan ganacsi marijuana sharci ah waa inay u hoggaansamaan shuruucda iyo qawaaniinta cannabis ee welwelka leh, ee mar walba kordhaya.
Maqaalka, waxaan ku baari doonaa tixgalinta sharciga ah ee ku lug leh sameynta ganacsiyada sharciga ah ee xashiishadda cannabis, xulashada nooca ganacsiga ay ku hawl galaan, iyo sugida adeegyada guryaha iyo adeegyada bangiyada ganacsiga.
Xulashada Ganacsi Xashiishad Sharciyeed
Gobol kastaa wuxuu leeyahay noocyo shati u gaar ah, iyo sidoo kale sharciyo iyo qawaaniin xukumaaya xashiishadda cannabis. Si aad uga shaqeyso ganacsi kasta oo sharci ah oo daroogada cannabis ah, waa inaad ruqsad ka heshaa gobolkaaga. Saddex nooc oo waaweyn oo noocyada ganacsiga marijuana ah ayaa jira; beerista, iibinta tafaariiqda, iyo waxsoosaarka wax soo saarkii.
Ganacsiyada ku lug leh beeritaanka xashiishka ayaa si adag loo sharciyeeyaa marka loo eego kuwa dhiggooda ah. Beerista Marijuana waxay ka kooban tahay kororka, qallajinta, goynta, daaweynta, iyo baakaynta dawada ee iibka xarumaha ama tafaariiqda. Hawlgalladaasi waxay u baahan yihiin aqoon sare oo khibrad xagga dhirta ah iyo caasimad weyn oo bilow ah.
Ganacsiga badeecada la is-gaadhsiiyay waxay ku lug leedahay helitaanka marijuana la cuni karo, cusbada, iyo sheyga yar yar ee laga helo xarumaha la oggol yahay iyo u siinta bukaanka iyo isticmaaleyaasha madaddaalada. Ganacsigani wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay geedi socodka ka soo saarista dawada iyo abuurista sheyga ku buuxan iibka, ka dib ganacsaduhu wuxuu markaa ku wareejinayaa badeecada la isku gudbiyay foomka baakadaha ku yaal bakhaarada tafaariiqda iyo miisaska.
Iibsashada tafaariiqda (oo sidoo kale loo yaqaan aruurinta ama warqadaha) waxaa loola jeedaa dukaamada guud ee wax ka qabta iibinta alaabada la xiriirta xashiishadda ee adeegsadayaasha kama dambeysta ah ee awoodda u leh. Xarumahani waxay dawooyinka ka soo saaraan soosaariyaha marijuana shati leh ama processor-gu waxayna siinayaan bukaanka u qalma iyo macaamiisha. Aasaasidda ganacsigan noocan ahi waa adag tahay waana qaali, laakiin abaalmarinada ayaa ah mid faa iido badan leh markay bilaabato hirgelinta.
Kahor intaadan bilaabin ganacsiga xashiishadda, waxaa ugufiican inaad la xiriirto qareen ku takhasusay cilmiga xashiishka. Qareenka diiradda saaraya cannabis ayaa kaala hadli doona dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta wuxuuna kaa caawin doonaa inaad codsato laysan ahaan sida sharcigu qabo. Gobollada qaarkood waxay leeyihiin daaqad codsi shati oo furan halkaasoo dhowr shati laga bixiyo hal mar, halka kuwa kalena ay xadidayaan tirada codsiyada laysanka waxayna u baahan yihiin caddeyn karti iyo helitaan raasamaal.
Qareen u leh xashiishad cannabis ayaa kaa caawin doona inaad xawaareyso dalabka laysanka iyo ogolaanshaha si ganacsigaagu u kiciyo una socodsiiyo sida ugu dhaqsaha badan. Qareen la'aan, waxaad ku qasban tahay inaad khaladaad ku sameyso arjiga, oo dib u dhigi kara ama xitaa burburin kara geedi socodka oo dhan. Garyaqaan ayaa kaa caawin doona inaad ka soo baxdid shuruudaha shuruudaha oo dhan si loo hubiyo inaad u hoggaansan tahay sida waafaqsan shuruudaha dalabkaaga liisanka.
Sugida Guri Real Estate Ganacsi Xashiishad Sharciyeed
Waxaad u baahan tahay inaad ka hesho goob macquul ah oo ku saabsan meheraddaada ku jiheysa xashiishadda oo si fudud ay ugu heli karto macaamiishaadu. Waxyaabaha qaarkood ee saameeya goobta xaruntaada waxaa ka mid ah qiimaha guryaha iyo u-dhowaanshaha iskuullada, kaniisadaha, iyo xarumaha xanaano-maalmeedka.
Haddii taraafikada cunnada ay tahay waxa ugu weyn ee aad ka welwelsan tahay, waa inaad sidoo kale u hoggaansanaataa siyaasadaha soonahaaga degmo iyo gobol marka aad dooraneyso goobta ganacsigaaga marijuana. Inta badan sharciyada soodhadhka ayaa dhigaya in ganacsi kasta oo laxiriira xashiishadda ay tahay in laga helo ku dhawaad ​​1,000 ft meel ka fog iskuulada, xarumaha xanaano-maalmeedka, iyo kaniisadaha.
Waxaad sameyn kartaa wada tashi aad la sameyso khabiirada warshadaha si aad uhesho waxqabadka ugufiican markaad hubineyso dhismaha ganacsigaaga sharci ah ee xashiishadda cannabis. Waxaa lagugu hagi doonaa sida loo xusho meesha saxda ah si aad ugu ilaaliso kharashaadkaaga ganacsiga sida ugu macquulsan.
Xashiishka SAFE Banki
In kasta oo in ka badan kalabar gobollada Mareykanka ay sharciyeeyeen oo ay maareyn jireen isticmaalka marijuana, bankiyo badan ayaa ka cago jiiday inay u adeegaan ganacsiyada la aqoonsan yahay ee warshadaha iyagoo ka baqaya ciqaabta federaalka. Xadeynta bangiyada federaaliga ee sii socota waxay ku qasabtay milkiilayaasha ganacsiga cannabis inay ugu horreeyaan lacag caddaan ah sababta oo ah ma awoodaan inay furaan akoonno bangi oo ay leeyihiin hay'adaha maaliyadeed ee ay dowladdu leedahay.
Nasiib wanaag, xayiraadahan waxay ku dhow yihiin inay soo gabagaboobaan oggolaanshaha Xeerka Bangiyeedka SAFE oo ay gaareen golaha sharci-dajiyayaasha California iyo Illinois. Sida ku xusan sharciga, ururada deynta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa loo oggol yahay inay helaan jaartarka gobolka ujeedo gaar ah oo ka caawiya iyaga inay siiyaan khidmooyin dhigaal ah ganacsatada sharci ahaan marijuana. Sharciga cusub ee bangiyada cannabis ayaa ka horjoogsanaya mas'uuliyiinta federaalka inay ku soo rogaan ganaaxyo bangiyo doorta inay adeegaan ganacsiyada cannabis ee sharciga ah (CRBs).
Dhaqangelinta Amni iyo Xaqso ah ee Bangiga (SAFE) wuxuu ku talajiraa inuu si habsami ah oo aamin ah u helo hay'adaha bangiyada ee ay dowlada federaalku siisay ee ka shaqeeya ganacsiga cannabis. Sharciga, oo helay oggolaanshaha koox xileed oo aad u tiro badan oo kala jaad jaad ah, waxay joojineysaa hay'adaha gobolka inay cunaqabateyn federaal ah u soo saaraan bangiyada ka shaqeeya CRBs ee ku yaal waddammada ay marijuanaantu sharci ka tahay sharciga.
Sharciga SAFE Banking, oo ay maalgaliso Ed Perlmutter, Denny Heck, Warren Davidson, iyo Steve Stivers oo taageero ka helaya waaxda bangiyada, waxay raadinayaan inay joojiyaan maamulayaasha bangiyada federaalka inay ugu hanjabaan nidaamka bangiyada dhaqameed kaliya sababta oo ah mulkiilayaashu waa CRBs. Waxay sidoo kale raadineysaa inay ka ilaaliso shaqaalaha bangiga mas'uuliyadda ciqaabta gobolka markii ay la shaqeynayaan ganacsiyada cannabis.
Sharciga cusubi wuxuu sidoo kale caqabad ku yahay isku day kasta oo gobol ka mid ah inuu ku khasbo hay'ad bangi inay joojiso bixinta adeegyada dhigaalka CRB, xaddiddo caymiskeeda ku aaddan adeegga CRB, dib u siinta sumcadda loo sameeyay CRB, ama qaado tallaabo kasta oo kale oo lagu arko inay tahay mid sharci darro ah. halka marijuana waa sharci.
Abuurista dekedan nabdoon ayaa ka ilaalin doonta bangiyada dhaqameed nooc kasta oo xukun aargudasho ah maamulayaasha bangiyada federaaliga ah. Xeerka Bangiga ee SAFE wuxuu qirayaa awooda nidaamka bankiga dhaqameedku u leeyahay inuu si buuxda ugu adeego warshadahaan, sidaa darteed looma baahna in dawlad la dhiso ururada kale ee amaahda si loo helo CRB-yada.
Waxaan nahay shirkad sharci oo adeeg buuxa ka shaqeysa kuna taal Peoria, Illinois. Magacaygu waa Qareen Thomas Howard. Waxaan hayaa koox aqoon u leh, karti leh, iyo qareenno u go'ay oo bixiya la-talin sharci oo dhameystiran macaamiisha ku jirta warshadaha cannabis. Aniga oo iskaashana kooxdeyda, waxaan kaa caawin karnaa sidii aad u bilaabi laheyd, u maareyn laheyd, oo aad u ilaalin laheyd ganacsigaaga xashiishadda, sugida shatiyada gobolka iyo ruqsadaha dagmada, aad uhesho meesha ugu fiican ee laguugu taagi karo ganacsigaaga marijuana, iyo in aad saameyn ku yeelatid hey'adaha keydka si ay kuugu fidiyaan adeegyada bangiyada ganacsigaaga la xiriira xashiishadda. .
Waxaan fahamsanahay dejinta ganacsi la xiriira xashiishadda inay u baahan tahay faham qoto dheer oo ku saabsan xeerarka sharci ee adag ee ku lug leh qaybtan. Siyaasadaha federaaliga ah ee xukuma beerista, haysashada, iyo qeybinta marijuana waa la badali karaa. Sababtaas awgeed, ujeedkeennu waa inaan ka caawinno ganacsatada inay bilaabaan ganacsi kobcinaya wershadaha xashiishadda caafimaadka iyo madaddaalada.
Waxaan ku faanaa qareenadayada ganacsiga marijuana ee kartida leh, ee leh aqoonta ugu wanaagsan ee federaalka, gobolka, iyo shuruucda maxalliga ah ee xukuma meheraddan. Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad joogteyso warshadan si joogto ah u kobcineysa adigoo sii joogaya 100% u hoggaansan dhammaan xeerarka jira. Waxaan rabnaa inaan hubino inaad fahanto sharci kasta oo quseeya xaaladaada si ganacsigaagu u guuleysto.
La xiriir qareenadeena fadhigiisu yahay Illinois maanta si aad ballan uga tashtaan. Waxaan halkaan u joognaa inaan ilaalino ganacsigaaga marijuana ka dhigista tallaabo kasta oo jidka loo maro.